Xisbiga Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed - Wikipedia
(Waxaa laga soo toosiyay XHKS)
Af-Carabi: الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي
Xubin ka noqo (1990)
Xisbiga Hantiwadaagga Kacaanka Soomaaliyeed (Af-Ingiriis: Somali Revolutionary Socialist Party, XHKS; Af-Carabi: الحزب الاشتراكي الثوري الصومالي, Al-Hizb Al-Ishtiraki At-Thawri As-Sumal) (XHKS) 1976 - 1991 waa xisbigii talada wadanka Soomaaliya hayay mudadii ugu dheerayd oo taxane ahayd 21 sano.
XHKS waxaa uu ka koobnaa Gollaha Sare ee Kacaanka, Gollaha Dhexe iyo Ururada Bulshada oo laga dooran jiray dhamaan 18 gobolka ee Soomaaliya.
1 Taariikhdii XHKS
2 Taliskii XHKS
3 Liiska Xisbiyada Siyaasada
5 Maqaalo kale
XHKS dadka qaar waxay faaladooda ku qoraan in wixii ka dambeeyay qaxii caasimada Muqdisho laga qaxay horaantii sanadkii 1991 inuu dhowr jeer xuubsiibtay isaga xiligaas ka horna soo maray magacyo kale sida Xisbiga Midowga Mareexaan ama Marehan Union iyada oo xaqiiqdii XHKS ay ku jireen dad ka soo jeeda dhamaan xubnaha ama qabaa'ilada Soomaaliyeed.
Xisbyada kale ee mideeyay ummada waxaa ka mid ahaa xisbigii SYL oo doorashaddii labaad ee madaxwaynimo ee wadanka Soomaaliya sanadkii 1967 uu lahaa musharax ka soo jeeda gobol walba iyo degma walba oo wadanka Soomaaliya ku taal.
XHKS markii uu talada wadanka la wareegay sanadkii 1969, waxaa isla markiiba la dhisay golle ka kooban hal xisbi. Sidaas ayuuna ku soo ifbaxay XHKS. Dhamaan madaxdii wadanka, 1974 markii la bedelay dastuurka qaranka ilaa burburkii 1991, waxay ka tirsanaayeen oo ahaayeen xubno XHKS.
Doorashooyinkii 1960 iyo 1967 waxaa kuraastii oo dhan kala qaatay dhowr xisbi oo kala ahaa SYL, Hisbiya D. M. (mucaarad ku ahaa in xoriyad la helo-garabsar Talyaaniga), Marehan Union, SNL iyo USC labo garab oo qabiilada waaweyn ee waqooyiga ku salaysan.
Liiska Xisbiyada Siyaasada
Tan iyo wakhtigii dadka Soomaalidu qaateen xoriyada waxaa jiray xisbiyo siyaasadeed. Sanadkii 1969kii ayaa waxaa talada wadanka la wareegay Golaha Sare Kacaanka (SRC) kuwaasi oo dhowr nooc oo xisbiyo ah soo bandhigay; sida Xisbigii Kacaanka Hantiwadaaga. Si kastaba ha ahaatee, waxaa wadanka Soomaaliya ugu horeeyay Xisbiga SYL, kuwaasi oo ahaa xisbigii la dagaalamay gumaystihii wadanka.
Markii Jaale Siyaad Barre la wareegay talada wadanka, waxaa meesha ka baxday dhamaan xisbiyadii bulshada ee madaxa banaanaa, wakhtigaasi oo wadanka Soomaaliya iskubedelay nidaamka shuuciyada ee laga keenay wadanka Ruushka iyo Shiinaha. Ka dib, markii uu dhacay dagaalkii sokeeye ee wadanka sanadkii 1991kii ayaa waxaa meesha ka baxday dhamaanba nidaamkii dowladnimo ee wadanka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, dadaalo badan oo dawlad dhisid ah ka dib waxaa Soomaaliya dib uga soo noolaaday nidaamka xisbiyada kuwaasi oo ilaa maanta daciif ah.
↑ Metz, Helen C. (ed.) (1992), "Coup d'Etat", Somalia: A Country Study, Washington, D.C.: Library of Congress, retrieved October 21, 2009 .
Xisbiyada Siyaasadda Soomaaliya
Midowga Dhalinta Soomaalida (SYL)
Xisbiga Hawl iyo Hantiwadaag
Xisbiga Cagaaran Soomaaliya
Xisbiga Dimuqraadiga Soomaaliya
Xisbiga Qaranka Soomaaliya
Xisbiga Nabadda iyo Horumarka
Liiska Xisbiyada Siyaasadda
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Xisbiga_Hantiwadaagga_Kacaanka_Soomaaliyeed&oldid=163175"
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay 06:10, 22 Oktoobar 2016.